Nhau - Hunhu hwehuni chaihwo pasi
SPC Hwoumbozha Vinyl Flooring
Hunhu hwehuni chaihwo pasi
Chairo huni pasi ndiyo yekugadzirisa mushure mekucheka chaiko nehunhu huni uye ikave, yakachengetedza iyo yekushongedza pateni ine yakanaka yakasikwa solid solid uye dhizaini zvachose, nekuti haina kushandisa namira mumiriri kuenzanisa kuchengetedza kwezvakatipoteredza kazhinji kudaro. Chairo huni pasi panoda kuisa keel kana ichiiswa zvakajairika, wedzera hunyanzvi hwehuni chaihwo pachahwo zviri nani zvakare, saka iyo nzwi yekunzwa kweiyo chaiyo pasi pehuni yakasununguka kwazvo.
Pasi chaipo pehuni chakapfava pakushandiswa, kana iri huni yakaipa, yakaoma kana yakanyorova nharaunda inogona kuita kuti deformation yayo itsemuke. Yayo yekupfeka-yekudzivirira degree yakadzika zvakare, haigone kukweva fenicha pairi, zvaive nani zvakare kusapfeka shangu panze kuti ikwire mudanda chairo rehuni kuti amble-nezve, gadzira kupfeka kwayo zvimwe kwakadaro. Kuchengetedza iyo lacquer pamusoro peiyo chaiyo huni pasi pevhu inopenya, yaive nemwedzi mitatu kana zvakadaro rova ​​wakisi.
Iko kunakirwa kweiyo chaiyo huni pasi
Kuchengetedza inzwi uye kupisa kupisa
Solid huni pasi zvinhu zvakaoma, chenjera huni fiber chimiro, yakaderera thermal conductivity, inovharidzira ruzha uye kupisa maitiro, zvirinani pane samende, zvedongo tile uye simbi. Nekuti ino pasi pehuni ine kurira-inonzwika, kuputira inzwi, inoderedza kumanikidza kweruzha, kupfupisa basa rekusara kweruzha nguva, kudzikisira kusvibiswa kwemhedzisiro yekukuvara kwevanhu.
Hunhu hunhu hwepasi chaihwo hwehuni ndewekuti, mamiriro ekunze akaoma, hunyoro hwematanda mukati kuburitswa; Mumamiriro ekunze ane hunyoro, huni dzinotora mwando kubva mumhepo. Pasi pehuni kupfuura uye kunosunungura hunyoro, nekuti uriri hwehuni hunogona kugadzirisa tembiricha yemukati, hunyoro otomatiki, kudzikamisa kuitika kwechirwere cherheumatism, uye nekuti kupisa kwayo conduction coefficient idiki, kuva nemhedzisiro neinodziya nguva yechando uye inotonhorera zhizha (kupisa kuchengetedza kuchengetedza kugona chose). Hazvina basa gore rese kutenderera chero nguva, kana munhu akagara pamusoro pevhu pevhu, anogona kunzwa akasununguka, haazotonhore, kunzwa kunotonhora, kunyanya mhuri ine mwana mumba. Dzidzo yesainzi yakaratidza kuti kugara-kwenguva refu mudzimba dzemapuranga kunogona kuwedzera hupenyu neavhareji yemakore gumi.
Kunodziya muchando uye kunotonhorera muzhizha
Munguva yechando, iyo tembiricha yepasi peiyo yakasimba huni pasi ndeye 8 ℃ ~ 10 ℃ yakakwira kupfuura yeiyo ceramic tile, uye vanhu vanofamba padenga rehuni vasina kutonhora kunzwa; Zhizha, tembiricha yekamuri yekurara yehuni chaiyo pasi inofanira kunge iri yakaderera pane tembiricha yemukamuri yetamic tile yakagadzika 2 ℃ ~ 3 ℃.
Green haina ngozi
Pasi chaipo pehuni inotorwa kubva musango rekare rine zvinhu, shandisa iyo yekupfeka-inodzivirira pendi yekupfeka iyo isina bonde risingachinji, simira kubva pane zvinhu kupenda kumeso zvese zvakasvibira uye zvisina kukuvara, hazvifananidzi ceramic tile kuti ive nemwaranzi, zvakare haina kufanana nekukudziridzwa. pasi kuve ne formaldehyde, ndeyegirini yakasvibirira uye isina njodzi ekuvakisa pasi zvinhu.
Post nguva: Zvita-29-2020
Kero: AIHWA. 169 Hanzhong Road, Qinhuai Dunhu, Nanjing Guta, Jiangsu Province, China